माघ ८ मै संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिवद्धः आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल भन्छन्, शेयर बजारमा चलखेल भयो - Artha ko Artha
माघ ८ मै संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिवद्धः आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल भन्छन्, शेयर बजारमा चलखेल भयो	Featured
शमुयल राना मगर, १८ मंसिर । माघ ८ गते नै संविधान जारी हुने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् । संविधान निमार्णका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरिरहेको जानकारी उनले दिए । ‘माघ ८ मै संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘असहमतिका विषयहरुमा सहमति जुटाउन उहाँले प्रयास गर्दै आउनु भएको छ ।’
पहिलो संविधान सभा ४ वर्ष पछि भंग भयो तर अब चाँहि यस्तो नहुने डा. नेपालको दाबी रहेको छ । ‘हो समय तालिका बनेको छ संविधान जारी गर्न, केहि जटिलता पक्कै आएको छ तर संविधान तोकिएको मितीमा नै जारी हुन्छ,’ उनले प्रस्ट पारे । अहिले नेपालमा सरकारले स्थायीत्व पाएको महशुस अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गर्दै आएको छ । सोहि कारणले पनि वैदेशिक सहयताको प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको उनले बताए ।
अब बन्ने संविधानले मुलुकको आर्थिक सम्पन्नतालाई महत्व दिनेछ, उनको धारणा थियो । ‘आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण र वेरोजगारी समस्याको समाधान नै संविधानको प्रमुख एजेण्डा रहने छ,’ आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल बताउँछन् । ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरकारले प्रयास गर्दै आएको छ ।’
पछिल्लो समय शेयरबजारको अवस्थाका बारेमा हाम्रो प्रश्नलाई डा. नेपालले बजारमा चलखेल भएको संज्ञा दिएका छन् । ‘शेयर बजारमा सिमित मान्छेहरुले चलखेल गरेका छन्, उनले भने ‘नत्र सुचिकृत कम्पनीहरुले राम्रो गरेको समयमा बजारमा यस्तो हुनै नपर्ने ।’ बजारलाई विश्लेषण गर्दा बजार बढ्नु पर्ने कारणहरु धेरै छन् तर केहिका कारण अन्य लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिराउने कार्य भैरहेको उनको दाबी रहेको छ । यसको लागि नियमन निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, वीमा समितिले आवश्यक कदम चाल्न पर्ने उनले बताए ।
शेयर बजार विकासका लागि चाहिने पुर्वाधार बनिनसकेको अवस्थामा यसको प्रक्रियामा जान आवश्यक रहेको उनको धारणा रहेको छ । ‘केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीको कार्यन्वयन, पुर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली र काठमाडौं बाहिर शेयर बजारको पहँुचलाई अभिवृद्धि छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शेयर बजार विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अबलम्वन गरिएका अभ्यासहरु नेपालमा लागु ढिलो भएको तर्क उनकोे थियो ।